Kana iwe uine miti mishoma pamba pako, saka dzimwe nguva unozoda cheni saw. Kunyangwe iri nekuda kwekuti dutu rarova pasi mamwe matavi, kana iwe uchida kudzikisa kukura kwemiti kuitira kuti mwenje wezuva upinde mugadheni rako, ruoko rwakaona runobatsira zvikuru. Vazhinji varidzi vedzimba havadi ini ...
Chii chandinofanira kutarisisa kana ndichishandisa chainsaw?
Chii chandinofanira kutarisisa kana ndichishandisa chainsaw? Muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, kunyanya mune zvimwe zvivakwa, tinowanzo kunzwa rudzi rwemheremhere. Uku ndiko kushandiswa kwemacheni. Chainsaws ane basa rakakura kukura. Masaha emagetsi, anozivikanwawo se "magetsi macheki", akagadzirwa neGerman A ...
Zvepasi rose kudyidzana kudzika, yemagetsi chishandiso musika kuvandudza iri kukurumidza kwazvo, iyo Internet pamusoro pemakore akawanda echinyakare maindasitiri shanduko yemabhizinesi modhi, yemagetsi chishandiso senge chinyakare indasitiri hazvidzivisike kubvuma kunetsekana kweInternet, akawanda emagetsi maturu compani .. .
25% PCR yakatambanudzwa firimu, 60% yakaderedzwa epurasitiki PP bhegi, Flushable chitaridzi, iyo inogona kugadzikana hunyanzvi mabasa akasarudzwa neGerman Packaging Awards iri kuuya
ne admin pane 20-12-01
Pasi penyika yepurasitiki inodzokorodza hupfumi, yakagadzikana kupakata hunyanzvi hwave iko kutungamira kwevakawanda kuedza kweiyi indasitiri. Yakaburitswa kutanga kwa2020 iyo yekuGerman yekupakata mubairo, hunyanzvi kurongedza kwekusimudzira budiriro ndeimwe yenyaya yakatarisa. Iye zvino tarisa iyo yeGerman pa ...
SABIC ine yekupakata michina vagadziri Syntegon, firimu mutengesi Ticinoplast uye extruding muchina mupi wePlastchim mushandirapamwe yakatanga chirongwa chakaomeswa chikafu chekurongedza, mhinduro, yekutanga polyethylene (PE) giredhi zvinhu zvakasanganiswa neiyo nyowani firimu yekugadzira tekinoroji. SABIC yakati, ...
Mushonga mutsva wekorona unotarisirwa kutanga panopera gumi nemaviri eaya epurasitiki ekurongedza emukana mukuru
Mushonga mutsva urikuuya, zvinonzi jekiseni riya, rinogona kusvika pa100%. Munguva pfupi yapfuura, mutungamiriri weboka rezvemishonga yenyika Liu Jingzhen akazivisa, achave majekiseni emushonga asingachagadziriswe anotarisirwa kutanga pakupera kwegumi nemaviri anoburitsa anopfuura mamirioni mazana maviri evamiririri. Saka mubvunzo unouya, ...
Polycarbonate PC mutengo -Taura nezve kugona kwemhuri yemapurasitiki mune yekurapa
Indasitiri yepurasitiki yakaita chikamu chakakosha mune iri denda rezvirwere. Semutambi mukuru mune yekurapa denda rekudzivirira zvekushandisa, mhuri yemapurasitiki uye ayo ekumusoro uye ezasi ezvekugadzirwa zvigadzirwa ave zvakare mune anoonekera. Polypropylene (PP), polyvinyl chloride (PVC), polycarbonate (...
Kutsemuka zvakapfava kurongedza marara zvakaoma? Aya marongero ekuronga akakosha kuunganidzwa
Flexible kurongedza kuri nyore kushandisa, asi zvine mukurumbira zvakaoma kudzokorora. MuBritain, semuenzaniso, iyo yekudzoreredza kwepurasitiki yekupakata yasvika 46.5%, asi chete 4% yekushanduka kuputira. Zvichigadziriswa kurongedza zvinowanzo zvine akawanda-maseru ezvinhu mamiriro, izvo zvinowedzera kuoma
Ko kusvibiswa kwepurasitiki kucharatidzika sei mumakore makumi maviri?
ne admin pane 20-08-04
Kana isu tichihodha kutora, tinogona kuona kuti mashanga ezvimwe zvinwiwa akasiyana nekare. Munguva pfupi yapfuura, kwakave nekuwedzera mubhizimusi rekudya uye chinwiwa, uye mabhizinesi mazhinji ari kubvisa zvishoma nezvishoma mapurasitiki kubva padanho renhoroondo. Izvi zvisati zvaitika, nyika zhinji dzakatotanga ku ...
Iyo symposium paMedical Plastic Innovation tekinoroji muChina 2020 yaive budiriro yakazara
Mumasikati aChikunguru 18, iyo "2020 China Medical Plastic Innovative Technology Seminar" yakaitirwa muQingdao inotungamirwa neMachini Maindasitiri Bazi reChina Kanzuru yeKusimudzira kweInternational Trade uye Shandong Association yeSainzi neTekinoroji, uye yakaitirwa naQingdao Kinuo .. .
Gumi nyowani epurasitiki zvinhu izvo zvichachinja nyika
Kwemazana emakore, kungwara-kwepfungwa kwakagadzira zvishamiso zvishandiso zvine USINGAGUMI, uye zvinopfuura chinhu chimwe chepurasitiki chakashandura nyika yedu Tarisa zvimwe zvezvinhu zvepurasitiki zvakachinja nyika. 1.Purasitiki yakachinja nyika - aluminium foam kuputira T ...
Ndezvipi zvirinani kune zvakatipoteredza: mapurasitiki anoderedzwa kana anodzoreredzeka?
Mapurasitiki anogadzirwa nehutachiona haanyatso kugadzikana nharaunda nekuti kuti biodegrade vanofanirwa kusiiwa pachena. Kune rimwe divi, kudzokororazve kunobatsira kutora kukosha kwemamwe ma polymers - kunyanya PET neHDPE, asi zvakare mamwe maPS nePP - asi iko kuunganidzwa, kurongedza uye kutakura ...
Denda rakaunza Renaissance yemapurasitiki anoraswa
ne admin pane 20-06-26
Nyika zhinji pasi rose dziri kushandira kubvisa mashanga epurasitiki nekusanganisa matanda kubva kunzizi dzemarara, kusanganisira nemitemo uye kurambidzwa. Mapurasitiki ezvitoro haana kufamba zvakanaka zvakare, kurambidzwa kwepasi rose kwemasaga epurasitiki kuri kuenderera mberi. iyo yepasi rose mar ...
Nhoroondo yezvipurasitiki zvinoumbwa
Kana maviri kana anopfuura akasiyana zvinhu zvabatanidzwa, mhedzisiro yacho inoumbwa nekushandiswa kwekutanga kwezvimisikidzo zvakatanga muna 1500 BC, apo vekutanga maEgipite neMesopotamiya vagadziri vakasanganisa matope nehuswa kugadzira zvivakwa zvakasimba. Straw inoenderera ichisimbisa zvigadzirwa zvekare, kusanganisira hari ...